RentaCar Club သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြဖြေဆိုရန်ပိုရှည်အခြားသူများထက်ယူစေခြင်းငှါအခြို့သောအရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုနှုန်း, သူကကားပိုင်ရှင်များ၏ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, နောက်ဆုံးမိနစ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကိုကြိုတင်တစ်ရက်ကျော်ဘွတ်ကင်အကြံပြုသောဤအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏။ ကြိုတင်မဲအတွက် booking အားဖြင့်, သင်ကားပိုင်ရှင်စီစဉ်ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးမိနစ်နေဆဲအလွန်ဖြစ်နိုင်မယ့်ကားကိုရှာဖဲ့ခြွေဘူး!
သငျသညျ2ဖြစ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာရှိသည်:
(ကအဝါရောင်မိုးကြိုးအတူ platform ပေါ်တွင်မှတ်သား) 'လက်ငင်းဘွတ်ကင်' 'ကမ်းလှမ်းကားကားပိုင်ရှင်အားလုံးကြိုတင်စာရင်းသွင်း Pre-အတည်ပြုထားပြီးဘယ်မှာကားများဖြစ်ကြသည်။ ငှားရမ်းငှားရမ်းတောင်းဆိုမှုများကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပိုင်ရှင်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲချက်ချင်းထိုအကားများစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ဤလမ်းကြောင်းနှင့်အတူသွားသဖြင့်လျင်မြန်စွာကားတစ်စီးရတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်! ဘွတ်ကင်ကဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံကိုလက်ငင်းထွက်ရှာပါ။
တောင်းဆိုမှုများကိုပေးပို့: 10 တောင်းဆိုမှုများကိုမှတက်မပို့ပြီးနောက်, သင့်ဘွတ်ကင်အတည်ပြုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ဖို့ကားပိုင်ရှင်များအတွက်စောင့်ပါ။ ခေတ္တမျှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ဖို့သတိရပါနှင့်ခရီးသွားလာအဘို့သင့်ရည်ရွယ်ချက်ဖော်ပြ။ အများစုမှာကားပိုင်ရှင်တစ်နာရီအတွင်းကိုတုံ့ပြန်ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားဥစ္စာထက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါစိတ်ကိုထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တုံ့ပြန်မမူလျှင်, ထိုဒေသတွင်အခြားကားပိုင်ရှင်မှထွက်ရောက်ရှိဖို့။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမပြန်ကြားလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျအဖြစ်သင်သည်များစွာသောကားပိုင်ရှင်အဖြစ်သတင်းစကားနိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေကအရေးပေါ်လျှင်အကူအညီကိုဆက်သွယ်ပါ။